Pacific-AA Online Shop | Pacific Beautex , Derma Glycolic Acid Exfoliator Cream Detail
/ Register / Log In
09 762 244441, 09 762 255551 contact@pacific-aa.com
Home All Products Special Offer About us Contact
Call us now: 09 762 244441, 09 762 255551 E-mail: contact@pacific-aa.com
> Category > Product Detail
Pacific Beautex , Derma Glycolic Acid Exfoliator Cream
UOM: 40 ml/1.01 fl. oz. Tube
Derma Glycolic Acid Exfoliator Cream ကို မိမိအိမ်မှာ တွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ လိမ်းနိုင်ပြီး အံ့သြဖွယ် ပြောင်းလဲမှုကိုယူဆောင်ပေးနိုင်ပါသည် ။
အသုံးပြုပြီးနောက် သင့်အရေပြားအား ပျော့ပြောင်းလာစေခြင်း ၊ ချောမွေ့လာစေခြင်း ၊ ဝင်းလက်လာစေခြင်း နှင့်အတူ အရေပြားအရောင်မညီညာခြင်းများကိုလည်း လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည် ။
- Exfoliator ကြောင့်အရေပြားမျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်း
- ဆဲလ်အသစ်များပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးခြင်း - အရေးအကြောင်းများနည်းစေပြီး အရေပြားအရောင်မညီညာခြင်းများကို လျော့နည်းစေခြင်း
- တောက်ပလာစေခြင်း - အရေပြား ကိုဝင်းလက်လာစေခြင်းနှင့်အတူ အရေပြား အခွံလဲသကဲ့သို့ အစွမ်းကြောင့် စိုပြည်တောက်ပစေခြင်း
- ကော်လာဂျင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအသစ်များဖြစ်ပေါ်စေရန် လှုံဆော်ပေးခြင်း
အရေပြားတွင် လိမ်းပြီး မျက်လုံးနှင့်နှာခေါင်းများမှ လွှဲ၍ မျက်နှာကို ဖိနှိပ်ပေးပါ ။ ၅ မိနစ်ထားပါ ။ ရေနွေးနွေးဖြင့် နှံ့စပ်စွာဆေးကြောပါ ။ တစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းလိမ်းနိုင်ပါသည် ။
ဆေးလိမ်းထားစဉ်အတွင်း မျက်နှာသည် ပုံမှန်ထပ်အနည်းငယ် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်နေနိုင်ပါသ်ည ။
Glycolic acid , Amino acid complex , Sodium Hyaluronate , Macadamia Integrifolia Seed Oil , Citrus Paradisi ( Grapefruit ) Fruit Extract , Helianthus Annuus ( Sunflower ) Seed Oil , Tocopherol
Glycolic acid , Amino acid complex , Sodium Hyaluronate , Macadamia Integrifolia Seed Oil , Citrus Paradisi ( Grapefruit ) Fruit Extract , Helianthus Annuus ( Sunflower ) Seed Oil , Tocopherol 40ml / 1.01 fl. oz.
ပြင်ပလိမ်းဆေးအနေနှင့်သာအသုံးပြုရမည် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များ လိမ်းရန်မသင့်တော်ပါ ။ ဤဆေးအား အသုံးပြုပြီးပါက နေလောင်ခံလိမ်းဆေးအသုံးပြုပါ ။ နေပူထဲ ထွက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ရပါမည် ။
မင်္ဂလာပါ၊ Pacific-AA Online Shop မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
Pacific-AA Online Shop တွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကို စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
လူကြီးမင်းမှာယူထားသည့် ပစ္စည်းများကို မိမိတို့ Pacific-AA Online Shop မှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အိမ်တိုင်ရာရောက်စိတ်ချသေချာစွာ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပြီး မှာယူသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း များကိုလည်း သေချာစွာစစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံနိုင်သည့်အတွက် စိတ်အေးချမ်းစွာမှာယူနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်။
Return Upon Delivery Policy
Copyright © 2021 PACIFIC-AA, POWERED BY MEGA MYANMAR LINK